Manao Tahiry ho an’ny Asan’Andriamanitra | EGW Writings
Fanoloran-TenaFampiasana Tsara ny TalentaTsy Misy Fotoana Very MainaSorona Hovaliana Soa
Raha misy tanora iray miasa sy mahay mitsitsy, na dia mahantra aza izy dia afaka hanokana vola ho an’Andriamanitra. Teo ho eo amin’ny roa ambin’ny folo taona teo aho no nahalala tsara izany atao hoe mitsitsy izany. Nianatra niasa niaraka tamin’ny rahavaviko aho, ary teo amin’ny dimy amby roapolo cents teo ho eo ny vola noraisinay isan’andro. Rehefa notontalina dia afaka nanangona telopolo dôlara izahay. Fifaliana ho anay mirahavavy ny nanome io vola io tamin’ny rainay rehefa tonga ny hafatra mikasika ny fiavian’i Jesôsy Kristy fanindroany ka nilaza taminy mba hividianany trakta amin’izany vola izany mba hozaraina amin’ireo olona mbola ao anatin’ny haizina.HAT 260.4
Tokony hianatra hahay mitsitsy ny fotoany ny olona rehetra manana fifandraisana amin’ny asan’Andriamanitra. Azo lazaina fa tsy manana fifamatorana amin’ny fahamarinana be voninahitra izay napetraka tamintsika ireo izay kamo. Mila ampianarina sy zarina hazoto hiasa ho voninahitr’Andriamanitra ireny olona ireny.HAT 261.1